ससुरालीमा ३ वर्षमा २२ वर्षको पिडा - Janakpur Today
ससुरालीमा ३ वर्षमा २२ वर्षको पिडा
in जनकपुर टुडे विशेष, प्रदेश, लेखहरु
राजदेवी नपा १ रौतहट
मेरो नाम अम्बिका कुमारी यादव ,जन्मघर सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका वड़ा नम्बर ७ टोल मुसैली भई ससुराली घर रौतहटको राजदेवी नगरपालिका वड़ा नम्बर १ पथरामा पर्छ ।
म महिला भएर पनि संघर्ष गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेकी छू । २०४८ साल आषाढ़ ११ मा जन्म भएको र २२ वर्ष पछि सामाजिक परम्परा अनुसार मागि वैवाहिक सम्वन्धमा २०७२ साल बैशाख २७ गते बाँधिए । राम पुकार राय यादवको छोरा पंकज कुमार यादव सित विबाह भई बैवाहिक जीवनको शुभारम्भ गरे ।
विबाह पछि जीवन सुखमय वित्ने भनी मनमा आशा गरेका थिए । तर सोचे जस्तो भएन । एउटै आमाको कोखवाट जन्मिने छोरा र छोरीको भाग्य विधाताले फरक फरक निर्धारण गरेको हुन्छ । छोरा राम्रो विद्यालयमा अध्यन गर्न जान्छ भने छोरी सामाजिक परम्परालाइ अपनाएर घरको काम काज मै सिमित भईनछ ।
जन्म देखि विभेद हिंसाको शिकार हुदै आएकी महिला माइतीबाट ससुराल जादा झन पीड़ामा पर्छिन । आफ्नो मानव अधिकार ,स्वतंत्रता , मौलिक हकÞ हुदा हुदै पनि पितृ सत्तात्मक सोच मानसिकताले पिरोलिनु परेको महिलाको वाध्यता हो । संविधानले दिएको हकÞ अधिकारको प्रयोग गर्दा ससुराली पक्षका व्यक्ति सित चरित्र हिन् भएको संज्ञा पाइन्छ ।
३ वर्ष मेरो विबाहको भयो । १ वर्ष सम्म नया बेहुलीको भूमिकामा घरमा थुनेर बस्नु परयो भने २ वर्षको अवधि कुटाई खाएर घर बाहिर बस्नु परयो । पहिलो सन्तानको रुपमा छोरा पाए । छोरा २ वर्षको भयो । दोस्रो गर्भ २ महीनाको हुदा श्रीमानले सम्वन्ध विच्छेदको मुद्दा हालेर घर बाहिर गरिदिए ।
घरमा सँगै बस्दा गर्भ बोकाउने लोग्नेले सम्वन्ध विच्छेद मुदा हाल्यो र ससुरा रामपुकार यादव , सासु जयलस देवी ,नन्द रविता यादवले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । गर्भपतन गराउन दवाव पनि दिए ऊनिहरुले पाठेघरमा प्रहार पनि गरे । ४ लाख बैंक मार्फत तथा ३ लाख नगद गरी सात लाख दाइजो लिएर छोरो विक्री गर्ने ससुराले म माथि अमानवीय व्यव्हार गरे ।
घरको १८ घण्टा काम गर्ने महिलालाइ उपभोगको बस्तु बुझने र दमन ,हिंसा ,मारपीट दासत्व समझने परम्पराको अंत कहिले हुने ? लोग्ने मानिस ले जे पनि गरे हुने तर स्वास्नी मानिस जोरले बोलन नहुने सामाजिक कुरीति कहिले सम्म ? जन्म दिन आमा बुआले पालन पोषण शिक्षा दीक्षा दिए पनि मन चाहा ढंगबाट दाइजो दिने लिने रिवाज कहिले सम्म कायम रहने ? यी सामाजिक कुसंस्कारको अंत नभए सम्म महिला सुरक्षित ,स्वतंत्र नहुने मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
रक्सी सेवन गरेर आउने लोग्नेले स्वास्नीलाइ पशु जस्तो कुटपिट गर्नु जायज हो ? मजदूरा जस्तो सवैको सेवा सुसार गर्ने जिम्मा मात्र बुहारीले पालन गर्ने ? यस्ता विषय अहिलेको अवस्थामा गंभीर र चुनौती पूर्ण रहेको छ । सासु कसैको बुहारी भएर बसेको होलिन उ पनि अरुको घरवाट आएकी छीन ,आफ्नो कोखबाट जन्मेकी छोरी पनि कसैको बुहारी श्रीमती भएर जाने छीन यो सामाजिक नियम हो तर सासुले बुहारीलाइ नौकर भएर आएकी बुझ्नु विडम्वना रहेको छ ।
आफु माथि भएको अन्याय ,अत्याचारको लागि न्यायलय , प्रहरी समक्ष जादा पनि कोही सहयोग नगरी पीड़कको पक्षमा लागेको देखेर दुःख लाग्यो , महिला भएर किन जन्मिए । पुरुषले सधै महिलालाइ अत्याचार ,हिंसा गरे पुग्दो रहेको छ भने हकÞ अधिकारको आवाज उठाउँदा चरित्र हिन् ,पर पुरुष सित अवैध सम्वन्ध राखेको गंभीर आरोप सहन गर्नु पर्छ ।
कानूनले प्रत्येक व्यक्ति जीवन विताउने स्वतन्त्र अधिकार हुने भनेको छ भने परेको बखत आवाज उठाउँदा कोही नसुन्ने । केहि नभए गरे पनि विभिन्न किसिमका आरोप लगाएर हत्या गरिने महिला नै हुन्छ ! रौतहट जिल्ला अदालतवाट कीटान गरी चाहिने आधारभूत सामान , स्वास्थ्य उपचार गरिनु पर्छ ,बास बसने व्यवस्था गर्नु पर्ने आदेश दीदा पनि कार्यान्वयन गर्न प्रहरी कार्यालय जादा प्रहरीले कुनै वास्ता गरेन । खाना पकाउनलाई ससुरावाट ग्यास सिलिन्डर , चुल्हा, भाडा वर्तन माग्दा प्रहरी समक्ष दिन इन्कार गरेका छन । उजुरी शाखामा रहेका प्रहरी नायव निरिक्षक प्रमानन्द यादवले विल पेश छैन , अदालतले किटान गरी समान उल्लेख नगरेकोले हामी दिलाउन सक्दैन भनि जवाव दिए ।
हत्या ,बलात्कार , महिला हिंसा , मानसिक, शारीरिक ,आर्थिक रुपमा यातना महिलालाइ नै दिइन्छ । पीड़क राजनितिक संरक्षणमा खुलेयाम घूमी रहेको हुन्छ पीडि़त प्रहरी ,सामाजिक अगुवा ,महिला अधिकारकर्मीको अघि पछि चक्कर लगाई रहेको हुन्छ तर न्याय पाउन सकिदैन । तराईमा दाइजो प्रथाको कारन तथा पीड़क माथि कार्यवाही नहुँदा महिला माथि हुने दमन ,हिंसा बढ्दै गएको छ ।
पढ़े लिखेको महिला भएर पनि न्यायको लागि भौतारी रहेको छू भने निरक्षर महिलाको जीवन कस्तो कस्टकार होला भनी कल्पना गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले बनाएको कानूनलाइ कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रभावकारी ढंगबाट लागु नगरेको कारन दिन्हू महिलाहरु आक्रमणको शिकार भैरहेको छ । नेताहरुले दाइजो लिनु हुदैन भन्दा पनि दाइजो लिने उच्च स्थानमा रहेका छन ।
छोरालाइ बस्तुको जस्तो मोलतोल गरी विक्री गर्ने केटा पक्षले बुहारी लाइ कुटपिट गरी अमानवीय व्यव्हार गर्दा कार्यवाही गर्ने कोही हुदैन । मधेशमा दिन प्रति दिन महिला हिंसा को घटना वृद्धि हुनुमा दाइजो प्रथा कारक हुन । म माथि दाइजोको निहुमा गरेको हिंसा दुखद र निंदनीय रहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पीड़कलाइ कार्यवाही गर्नुको साटो मिलापत्र गर्न दवाव दिनु कानून विपरीत तथा अपराध गर्नेको मनोबल बढाउने कार्य रहेकोले यस्तो कार्यको न्यूनीकरण गरी कार्यवाही तरफ अग्रसर हुनु पर्दछ । महिला हिंसा दमन सहने होइन पुरुष सराह स्वतन्त्र जीवन विताउने वातावरण हुनु पर्छ । महिलालाइ आफ्नो मर्यादामा बस्नु पर्छ भने पुरुषलाइ पनि नारीको सम्मान दिनुको साथै अधिकारको संरक्षण गर्नु कर्त्तवय हो ।
नारी शक्ति हुन ,नारी आमा ,दीदी ,बहिनी ,हजूर आमा , श्रीमती पनि हुन । नारीको जहा मन सम्मान हुदैन भने त्यहा ईश्वरको बास र विकास संभव छैन ।
मध्य तराईमा फेरी हावाहुरीको त्रास, एकको मृत्यु
उद्दार गरिएका बाल बालिका अभिभावकको जिम्मा